IOS 14.2.1 yave kuwanikwa yeiyo HomePod uye HomePod Mini | IPhone nhau
IOS 14.2.1 ikozvino yave kuwanikwa yeiyo HomePod uye HomePod Mini
Ngirozi Gonzalez | | HomePod, iOS 14, Noticias
Apple iri kushanda iOS 14.3. Mune yavo betas isu takakwanisa kuona kumwe kudonha kweyekufungidzirwa kweanofungidzirwa AirPods Studio uye iko chaiko kwemaAirTags. Nekudaro, iyo yepamutemo betas inoenderera ichiitika uye hapana zuva rekuburitsa reiyi vhezheni zviri pamutemo. Nekudaro, iyo yazvino yekuvandudza yakagamuchirwa neiyo iPhone 12 munaNovember apfuura ne yakasarudzika vhezheni yetemu matsva: iOS 14.2.1. Mune ino gadziriso, zvikanganiso muPhones nyowani zvakagadziriswa pasina zvakawanda nhau. Nhasi Apple yakagadzirisa iyo HomePod uye HomePod Mini kune iOS 14.2.1 pamwe nekuvandudza mashandiro uye madiki bug bug fixes.
Apple inoburitsa iOS 14.2.1 yeiyo HomePod uye HomePod Mini
Izvi ndizvo zvinoita sePambaPod Mini nyowani mukati, iwe unozoona zvinhu zvisipo
HomePod software vhezheni 14.2.1
Ichi chigadziriso chinosanganisira kuita kwakawanda uye kugadzirisa kugadzikana.
Iyo HomePod uye HomePod Mini inoshandisa iOS ku gadziridza yako yekushandisa system izvo zvinoenda zvinoenderana nekuvandudzwa kweiyo iPhone. Ndokusaka zvichidikanwa kuve neiyo iPhone kana iPod Kubata kuvandudzwa kune yazvino vhezheni kuti ugone kuwana iyo HomePod inogadziridza. Sezvatakarangarira kare, iPhones 12 yakagamuchira iOS 14.2.1 wekupedzisira Mbudzi nemeseji meseji uye yekukiya skrini bug bug inogadziriswa Iyo yaive yakasarudzika yekuvandudza yeiyo iPhone 12.
Zvisinei, maawa mashoma apfuura Apple yakagadziridza iyo HomePod uye HomePod Mini kune vhezheni iOS 14.2.1 pasina nhau huru sezvo iko chete kugadzikana kwesoftware kwakagadziridzwa uye kugadzirisa mukuita kwayo kwakawedzerwa. Kuti uwane iyo yekuvandudza, iwe unongofanirwa kuwana iyo Yekushandisa app uye iwe uchazoziviswa nezve kuvapo kweyekuvandudza. Mushure mekuenderera mberi kupa mvumo kune iyo iPhone kurodha pasi uye kugadzirisa, maitiro acho anotanga izvo zvinongogara maminetsi mashoma sezvo iyi vhezheni inongorema mashoma megabytes kana ichienzaniswa nemamwe makuru makuru anogona kuyera mazana emamegabhayithi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » IOS 14.2.1 ikozvino yave kuwanikwa yeiyo HomePod uye HomePod Mini
Apple Music inotanga kusvika kuGoogle smart speaker
Runyerekupe Rutsva Nezve Iwo 10 iPhones '2022x Periscope Zoom Lenses